ट्याक्सीवालाहरु किन यति छाडा ? गाउँबाट काठमाडौँ आउँदा भन्दा ओर्लिएर कोठा पुग्न डबल भाडा ? – Sandesh Press
ट्याक्सीवालाहरु किन यति छाडा ? गाउँबाट काठमाडौँ आउँदा भन्दा ओर्लिएर कोठा पुग्न डबल भाडा ?
October 18, 2021 294
दशैं सकिएको अझै छैन । टिका लगाउने क्रम अझै जारी छ । दशैंका बेला काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक गाडीहरु कम हुने नै भए । र त आआफ्नो आफन्तजनका टीका लगाउनको बिहानै देखि सर्वसाधारणहरु ट्याक्सी खोजिरहेका थिए । उपत्यकाका चोकचोकमा पहिलेजस्तो ट्याक्सी यात्रु पर्खेर बसेको देखिदैनथ्यो । ट्याक्सी नपाएर आफ्नो गन्तब्य स्थल पुग्न ट्याक्सी कुरेर बसेको पनि यत्तिकै थिए ।टीका लगाउने जाने …काठमाडौं। चीनको तर्फबाट अमेरिकामा भइरहेको जासुसीका विषयमा महत्वपूर्ण खुलासा भएको छ । चीनकी एक महिलाको पाँच वर्षसम्म अमेरिकाका कैयौं नेताहरुसँग यौनसम्बन्ध थियो ।
ती महिला खासमा चीनकी जासुस भएको र उनले सूचना पाउनकै लागि अमेरिकी नेताहरुसँग रात बिताउने गरेको खुलासा भएको छ । यी महिलाको कैयौं नेताहरुसँग प्रेम सम्बनध थियो । अक्सिअसको रिपोर्टअनुसार यी महिलाको कम्तीमा २ अमेरिकी नेताहरुसँग यौ’न स’म्बन्ध र’हेको पुष्टि भएको छ । अन्य नेताहरुसँग पनि उनको सम्बन्ध रहेको भए पनि रात बिताएकै कुराको भने पुष्टि हुन सकेको छैन ।
रिपोर्टअनुसार यी महिला फांग फांग र क्रिस्टिन फांग नामले चिनिन्थिन् । यी महिलाले चिनियाँ खुफिया एजेन्सीको लागि काम गरिरहेको रिपोर्टमा दावी गरिएको छ । फांगले कैयौं अमेरिकी नेताहरुका लागि निर्वाचनमा पैसा जुटाउने काममा सहयोग पनि गरेकी थिइन् । फांग सन् २०११ देखि २०१५ सम्म अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा बसेकी थिइन् । जब उनलाई एफबीआइले आफूलाई पक्रन सक्ने आभास भएपछि उनी अमेरिकाबाट भागेको रिपोर्टमा दावी गरिएको छ ।
फांगले अमेरिकी संसदका युवा सदस्यहरुसँग निकटता बढाउने कोसिस पनि गरेकी थिइन् । अमेरिकी सांसद एरिक स्वालवेल दोस्रो पटक चुनाब लड्दा फांगले पैसा जुटाउने काममा सहयोग पनि गरेकी थिइन् । फांगले पैसा जुटाउन तुलसी गबार्डलाई पनि सहयोग गरेकी थिइन् । क्यालि-फोर्नियाको राजनैतिक सर्कलमा फांग निकै चर्चित भएकी थिइन् । ती महिलाले त्यहाँका २ जना नेताहरुसँग यौन सम्बनध पनि राखेकी थिइन् । रिपोर्टमा उनले चीनको सुरक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा जासुसी गरेको दावी गरिएको छ ।
रिपोर्टका अनुसार एफबीआइले फांगको बारेमा अचानक जानकारी पाएको थियो । एजेन्सीले अर्कै एक व्यक्तिको बारेमा जाँच गर्ने क्रममा फांगको बारेमा अचानक खुलासा भएको थियो । फांगले अमेरिका आएपछि क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीमा भर्ना भएकी थिइन् । फांग चिनियाँ विद्यार्थी संगठन तथा एसियन प्यासिफिक आइल्याण्डर अमेरिकन पब्लिक अफेयर्सको अध्यक्ष पनि भएकी थिइन् । यी दुई पदमा रहने क्रममै फांगको क्यालिफोर्नियाको राजनैतिक सर्कलमा प्रवेश भएको थियो ।
भारतलाई टुक्र्याइदिने चीनको चेतावनी पछि मोदी सरकारमा भूकम्प, के हुन्छ अब ? काठमाडौं। भारतले चीनलाई विभाजन गर्ने गरी ताइवान कार्ड खेल्न नछाडे चीनले पनि भारतलाई टुक्र्याइदिने चीनको सरकारी अखबारले चेतावनी दिएको छ । चीनको सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीनिकट अखबार ग्लोबल टाइम्समा एक लेख प्रकाशित गर्दै चीनका अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ लंग जिंगचुनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । जिंगचुन चीनको चेंगडु अफ वर्ल्ड अफेयर्सका अध्यक्ष समेत हुन् ।
जिंगचुनले चीनले भारतमा आन्तरिक विद्रोह सुरु गराउन सक्ने र यसले भारतलाई विभाजनसम्म पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । भारतले ताइवान कार्ड खेल्न नछाडे चीनले पनि भारतमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाउन सक्ने उनले चेतावनी दिएका हुन् । चीनले ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न अंग मान्छ तर ताइवानले भने आफूलाई छुट्टै देश भन्ने गरेको छ । ताइवानलाई केही देशले छुट्टे देशको मान्छन् भने केहीले मानेका छैनन् ।
जिंगचुनले लेखेका छन् ‘यस्तो देखिन्छ कि चीन र भारतबीच सीमाका विषयमा जारी तनावका क्रममा भारतलाई ताइवान कार्ड खेल्ने लत लागिसकेको छ ।’ जिंगचुनले अगाडि भनेका छन् ‘अहिलेसम्म भारतले चीनको एक चीन नीतिलाई मान्दै आएको छ र यही कारण चीनले पनि भारतमा पृथकतावादीहरुलाई समर्थन दिइरहेको छैन । तर यदि भारतले ताइवानलाई समर्थन दिन जारी राख्यो भने चीनले भारतमा विद्रोह सुरु गराउन सक्छ ।’
जिंगचुनले लेखमा चेतावनी दिँदै भनेका छन् ‘भारतका उत्तर पूर्वी राज्यहरु त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम र नागाल्याण्डमा पृथकतावादीहरुलाई विद्रोह गर्नको लागि चीनले समर्थन दिन सक्छ । किनकि यहाँका जनता फरक जातिका छन् जो आफूलाई भारतको अंग मान्दैनन् र यीमध्ये कैयौं क्षेत्र ब्रिटिस शासनमा पहिले म्यानमारको अंग थिए ।’
ताइवान कार्ड खेलेर भारतले आफ्नै हितलाई नोक्सानी पुर्याइरहेको बताउँदै जिंगचुनले अगाडि भनेका छन् ‘यदि भारतका पृथकतावादीहरुले चीनको समर्थन पाए भने उनीहरु विद्रोह सुरु गर्न सक्छन् ।’ उनले पृथकतावादीहरुको म्यानमारका सुरक्षा बलसँग निकटको सम्बन्ध समेत निकट सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै यो सम्बन्धले भारतका लागि कठिनाइ बढाउने समेत उल्लेख गरेका छन् ।
Prevआमासँग फोनमा बोल्दाबोल्दै दुर्घटनामा परेर मञ्जुले प्राण त्यागिन् ?
Nextकैयौं अमेरिकी नेताहरुसँग यौ’नस’म्बन्ध भएकी महिला चिनियाँ जासुस भएको खुलासा
पहिलो पटक आमा बन्ने महिलाले भूलेर पनि नखानुहोस् यी खाना, हुनसक्छ गर्भपतन